यसरी गर्नुहोस् अवश्य हुनेछ हात खुट्टामा आउने मुसा र यसको उपचार
मंगलवार, नोभेम्बर 12, 2019
गाईको दूधको महत्व र फाइदाहरु
डिसेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, मुसा
मुसा शरीरमा हुने मुसा ले यदि कसैलाई सताएको भएमा यो अपनाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु यो मेरो अनुभुत प्रयोग हो । कतिपय साथीहरु यो कुरामा विश्वास गर्नु हुन्न होला तर मैले यो विधि सिकाएर थुप्रै मुसाका रोगी निको हुनु भएको छ । यो होम्योपैथीक औषधि हो ।
सानो तामाको टुक्रालाई ढुंगामा घोट्नुहोस घोटेको पानीमा तामाको टुक्रा राखेर मुसाको दोहोलो भन्दै छुवाएर चौबाटोको वीचमा राखि दिनु क्रमश: केहि महिनामा सवै मुसाहरु नस्ट भएर झर्छ यस्लाई विश्वास नगर्नेले प्रयोग नगर्दा हुन्छ ।
मात्रा : २ थोपा दिनमा एक पटक केहि दिन खान दिनुपर्ने छ । पुरा जानकारी चाहिएमा ९८५७०४०२९८मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ । यो औषधि राम्रो र विश्वसनीय कम्पनीको हुनुपर्छ । यो औषधि हाम्रो बोहरा होम्यो फार्मेसी मध्यविन्दु नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
← कपाल झर्ने कारणहरु र यसको रोकथाम
के हो क्यान्सर ? यसको उपचार कसरी गर्ने ? →
मे 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
सेप्टेम्बर 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “हात खुट्टामा आउने मुसा र यसको उपचार”